Menyaa Me Nsɛmmisa Ho Mmuaeɛ a Ɛtɔ Asom wɔ Bible Mu Maa Me Koma Tɔɔ Me Yam | Bible Tumi Sesa Nnipa
Ɔwɛn-Aban | February 2015
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mam Maya Mazatec (Huautla) Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Bible mu mmuaeɛ a emu da hɔ maa me koma tɔɔ me yam
Ernest Loedi anom asɛm
AFE A WƆWOO NO: 1948
ƆMAN A ƆFIRI MU: HUNGARY
TEBEA A NA ƆWOM: NÁ MEPƐ SƐ MENYA NSƐMMISA A ƐHO HIA PAA NO HO MMUAEƐ
ME KANE ASETENA:
Wɔwoo me Hungary kuro bi a wɔfrɛ no Székesfehérvár. Wɔkyekyeree kuro no, bɛboro mfeɛ 1,000 ni, na ɛwɔ abakɔsɛm pii a ɛyɛ anika. Nanso sɛ mekae nsunsuanso bɔne a wiase nyinaa ko a ɛtɔ so mmienu de aba ɔman no so no a, ɛma me werɛ ho paa.
Me nanabarima ne me nanabaa na wɔtetee me wɔ me nkwadaaberɛ mu. Ɛyɛ a mekae wɔn paa, ɛnkanka me nanabaa Elisabeth. Ɔboaa me maa menyaa Onyankopɔn mu gyidie kɛse. Ɛfiri berɛ a medii mfeɛ mmiɛnsa no, anwummerɛ biara na me ne no nyinaa bom bɔ nea wɔtaa frɛ no Awurade Mpaebɔ no. Saa berɛ no nyinaa mante saa mpaebɔ no ase kɔsii sɛ aka kakra ama madi mfeɛ 30.
Nea ɛmaa mekɔdii me nanabarima ne me nanabaa nsam ne sɛ, na m’awofoɔ pɛ sɛ wɔnya sika tɔ wɔn ankasa fie, enti na wɔyɛ adwuma awia ne anadwo. Nanso Memeneda a ɛtɔ so mmienu wɔ bosome biara mu no, na abusua no nyinaa hyiam didi. Saa berɛ no duru a, na m’ani gye paa.
Afe 1958 mu no, m’awofoɔ nsa kaa nea na wɔrehwehwɛ no; wɔtɔɔ efie, na yɛn mmiɛnsa nyinaa tu kɔtenaa mu. Afei, me ne m’awofoɔ kɔtenaeɛ. Sɛnea m’ani gyeeɛ deɛ, yɛnka! Nanso, bosome nsia akyi pɛ na anigyeɛ no nyinaa tu yeraeɛ; kokoram (cancer) kum me papa yayaaya.
Asɛm no bubuu me koraa. Mekae sɛ mebɔɔ mpaeɛ sɛ: “Onyankopɔn, mesrɛ wo, ma me papa nnya ahoɔden. Mehia no. Adɛn nti na woantie me mpaebɔ?” Ná mepɛ paa sɛ mɛhunu baabi a me papa wɔ. Enti mebisaa sɛ: ‘Ɔkɔ soro? Anaa wayera korakora?’ Sɛ mehunu mmɔfra a wɔn papa te ase a, na m’ani bere wɔn.
Ɛrekame ayɛ sɛ da biara na mekɔ asieeɛ hɔ; meyɛɛ saa mfeɛ pii. Ná mekɔ me papa nna so kɔbu nkɔtɔdwe bɔ mpaeɛ sɛ: “Onyankopɔn, mesrɛ wo kyerɛ me baabi a me papa wɔ.” Mesan bɔɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn mmoa me mma menhunu nea enti a yɛwɔ wiase.
Berɛ a medii mfeɛ 13 no, meyɛɛ sɛ mɛsua German kasa. Ná Germanfoɔ wɔ nwoma pii a ɛka nneɛma bebree ho asɛm, na na mesusu sɛ mɛnya me nsɛmmisa no ho mmuaeɛ wom. Afe 1967 mu no, mefirii aseɛ suaa wɔn nwoma ahodoɔ no wɔ kuro bi a wɔfrɛ no Jena a saa berɛ no na ɛka East Germany ho no mu. Meyeree me ho kenkan nwoma a Germany animdefoɔ atwerɛ, ɛnkanka wɔn nwoma a ɛka nea enti a nnipa wɔ wiase ho nsɛm no. Ɛwom sɛ menyaa nsɛm kakra deɛ, nanso emu biara nni hɔ a ɛkaa me koma. Enti mekɔɔ so ara bɔɔ mpaeɛ hwehwɛɛ me nsɛmmisa no ho mmuaeɛ.
SƐNEA BIBLE SESAA M’ASETENA:
Afe 1970 mu no, mesan kɔɔ Hungary. Ɛhɔ na mekɔhyiaa me yere Rose. Saa berɛ no, na Hungary hyɛ Komunis amammuo ase. Yɛwareeɛ no, ankyɛ koraa na me ne Rose dwane kɔɔ Austria. Ná me wɔfa wɔ Australia kuro Sydney mu, enti ɛhɔ paa na na yɛayɛ sɛ yɛbɛkɔ.
Yɛduruu Austria no, ankyɛ na menyaa adwuma. Da koro bi, obi a me ne no yɛ adwuma ka kyerɛɛ me sɛ, mɛtumi anya me nsɛmmisa no nyinaa ho mmuaeɛ wɔ Bible mu. Ɔmaa me nwoma ahodoɔ bi a ɛkyerɛkyerɛ Bible mu, na mede anigyeɛ kenkan no ntɛm ara. Ná mepɛ sɛ mehunu nneɛma pii ka ho, enti metwerɛɛ krataa kɔmaa Yehowa Adansefoɔ a wɔtintim saa nwoma no sɛ wɔmmrɛ me bi.
Yɛwareeɛ no, da a yɛdii afe pɛpɛɛpɛ na aberanteɛ bi a ɔyɛ Yehowa Danseni a ɔfiri Austria bɛsraa me ne Rose. Ɔde nwoma a me bisaeɛ no brɛɛ me, na ɔkaa sɛ ɔne me bɛsua Bible, na me nso mepenee so. Esiane sɛ na mepɛ sɛ mehunu nneɛma pii nti, nnawɔtwe biara na yɛsua adeɛ mprɛnu. Ná adesua no mu biara di bɛyɛ nnɔnhwere nnan!
Nneɛma a Adansefoɔ no maa mehunu firii Bible mu no kaa m’akoma paa. Berɛ a wɔmaa mehunuu Onyankopɔn din, Yehowa, wɔ me Bible a ɛwɔ Hungary kasa mu no, me ho dwirii me. Mfeɛ 27 a mede kɔɔ asɔre nyinaa no, mante Onyankopɔn din da. Bible mu nsɛm a emu da hɔ na ɛtɔ asom no maa menyaa me nsɛmmisa ho mmuaeɛ maa me koma tɔɔ me yam. Nneɛma a mebɛhunuiɛ no bi ne sɛ, onipa wu a ɔnnim hwee; ɛte sɛ nea wada hatee. (Ɔsɛnkafoɔ 9:5, 10; Yohane 11:11-15) Mesan bɛhunuu sɛ Bible ahyɛ wiase foforɔ bi ho bɔ, na ɛhɔ deɛ, “owuo nni hɔ bio.” (Adiyisɛm 21:3, 4) Mehwɛ kwan sɛ mɛhunu me papa bio, ɛfiri sɛ wiase foforɔ no mu no, wɔn a wɔawuo no “bɛsɔre afiri awufoɔ mu.”—Asomafoɔ Nnwuma 24:15.
Me yere Rose nso de anigyeɛ bɛkaa me ho ma yɛsuaa Bible no. Yɛnyaa nkɔsoɔ ntɛmntɛm, enti bosome mmienu pɛpɛɛpɛ, yɛwiee nwoma a na yɛresua no! Yɛkɔɔ Adansefoɔ no Ahennie Asa so, na yɛamma wɔn asafo nhyiamu biara ampa yɛn tiri so. Sɛnea Yehowa Adansefoɔ dodɔ wɔn ho na wɔboa wɔn ho wɔn ho, ne baakoyɛ a ɛwɔ wɔn ntam no kaa yɛn koma paa.—Yohane 13:34, 35.
Afe 1976 mu no, me ne Rose nyaa kwan kɔɔ Australia. Yɛduruu hɔ ara pɛ na yɛkɔhwehwɛɛ Yehowa Adansefoɔ. Wɔn nso gyee yɛn awaawaa atuu. Afe 1978 mu no, yɛn nso yɛbɛyɛɛ Adansefoɔ.
SƐNEA ABOA ME:
Seesei deɛ, manya nsɛmmisa a na akyere m’adwene berɛ tenten no ho mmuaeɛ. Yehowa Nyankopɔn a mabɛn no no ama manya Agya a obiara ne no nsɛ. (Yakobo 4:8) Afei nso, anidasoɔ a manya sɛ mɛhunu me papa a ɔwoo me no bio wɔ wiase foforɔ a ɛreba no mu no ma m’ani gye paa.—Yohane 5:28, 29.
Afe 1989 mu no, me ne Rose sii gyinaeɛ sɛ yɛbɛkɔ Hungary akɔka nea yɛasua afiri Bible mu no akyerɛ yɛn nnamfo, yɛn abusuafoɔ, ne nnipa afoforɔ a yɛbɛhyia wɔn. Yɛanya hokwan ne nnipa pii asua Bible no. Wɔn mu bɛboro 70 na wɔne yɛn resom Yehowa. Wɔn mu baako ne me maame a medɔ no no.
Mebɔɔ mpaeɛ mfeɛ 17 hwehwɛɛ me nsɛmmisa ho mmuaeɛ. Mfeɛ 39 atwam; meda so ara bɔ mpaeɛ, nanso seesei deɛ, mɛtumi aka sɛ, “Me soro Agya Nyankopɔn, meda wo ase sɛ woabua mpaeɛ a me firi me nkwadaaberɛm bɔeɛ no.”
Bible Tumi Sesa Nnipa Asomdwoe Ne Anigye
Yebetumi Anya Asetena a Akomatɔyam Wom Anaa?
Sɛ amanehunu anaa ɔhaw bi to yɛn a, saa bere no paa na ehia sɛ yehu sɛ yebetumi anya asetena a akomatɔyam wom anaa yɛrentumi.
Ɛdeɛn na Yɛyɛ wɔ Ahennie Asa So?
Hwɛ video yi na wobɛhu.
ASƐM A ƐDA SO Adwumaden​—Ɛho Hia?
ASƐM A ƐDA SO Nea Ɛbɛma W’ani Agye Adwumaden Ho
YEHOWA DANSENI BI NE OBI BƆ NKƆMMƆ Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Woyɛ Bible Mu Nhwehwɛmu?
BIBLE TUMI SESA NNIPA Bible mu mmuaeɛ a emu da hɔ maa me koma tɔɔ me yam
SUASUA WƆN GYIDI “Ɛnyɛ Onyankopɔn na Ɔkyerɛ Daeɛ Ase?”
Bible Yɛ Nhoma a Nnipa Nyansa Ahyɛ Mu Ma Anaa?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN February 2015 | Nea Ɛbɛma W’ani Agye W’adwuma Ho
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN February 2015 | Nea Ɛbɛma W’ani Agye W’adwuma Ho
February 2015 | Nea Ɛbɛma W’ani Agye W’adwuma Ho
ƆWƐN-ABAN February 2015 | Nea Ɛbɛma W’ani Agye W’adwuma Ho
Me Deɛ, Na Migye Di sɛ Onyankopɔn Nni Hɔ
Ná Mepɛ Baseball Sen Biribiara!
Ná Mempɛ sɛ Miwu!
Ná Nsɛm Haw Me, na na Midi Atuturasɛm